Kaaba waxaa ku jiri lahaa dhagax madow oo uu keenay Milateriga Jibriil - Afrikhepri Fondation
Kaaba waxaa ku jiri lahaa dhagax madow oo uu keenay Milateriga Jibriil
min aqri 8 min
Bdad badani waxay isweydiinayaan waa maxay Kaaba? maxuu ka kooban yahay? maxaa loogu talagalay? taariikhdeedu waa maxay? maxaayna rumaystayaashu u leexanayaan? waa kan sheekadiisu ..!
Kaaba oo macnaheedu yahay "Cube" ayaa sidoo kale loo yaqaan "Beiit ALLAH" oo macnaheedu yahay "gurigii Ilaah", waa beddelaad dhisme isku mid ah oo Jannada ku sugan.
Au Qarnigii X-, Kaaba waxa uu ku hareeraysan yahay dhismayaal yaryar iyo dabaqyo qallafsan oo dabiiciyan ah (sida pagoda).
1 - The Dhagax madow (Xagasha koonfur bari) (carab : الحجر الأسود [al-hajar al-aswad]). in 684, Kaaba waxa uu waxyeeleeyay dab, dhagax madaw qarxay sababtoo ah kuleylka. in 930, midkani waxa qaata kan Qarmats, waxaana lagu soo celiyay 950. Waxaa lagu sharxay qaab lacag.
2 - Albaabka Kaaba (derbiga bari).
3 - biyomareenka (dahab) si looga baxo biyo kasta (derbiga North) (Carabi: ميزاب [Mizab] biyomareenka). in 1626 daadadku waxay burburiyaan saddex ka mid ah afarta derbi ee Kaaba. Waxaa dib loo dhisay 1627. Tani waa markii aan xirxirayno maantadan laydhka iyo 'ch'dharwân' kaasoo ilaaliya salka biyaha socda.
4 - Chadharwan waa qayb ka mid ah xayiraadda Kaaba (Carabi:الشاذروان [Al-šāḏarwān])
5 - Meesha lagu magacaabo Hatim (الحطيم, [al-haṭīm], Qayb) waxaa ku xidhnaa darbiga hoose ee loo yaqaan 'pierre d'Ismaaciil, sida laga soo xigtay ilo kale erayga Hatim sidoo kale waxay tilmaamaysaa derbiga. Tani waxay u dhigantaa qayb ka mid ah Kaaba asalka ah kaas oo la aasi doono Agar, hooyadii Ismaaciil (Carabi: حجر إسماعيل [hijar ismānīl].
6 - Al-Multazam (ملتزم [multazam], ku xiran ballanqaad) wuxuu u taagan yahay derbiga u dhexeeya albaabka Kaaba iyo dhagax madow.
7 - SaldhiggaIbrahim (Carabi: مقام إبراهيم [maqām ibrāhīm], Saldhigga Ibraahim): intii lagu gudajiray dhismaha Kacbada by Ibraahim iyo wiilkiisa Ismaaciil, midkan dhererka qaadaya, nebiga waxaa lagu qasbay inuu ku dul fuulo dhagaxan, halka uu kaga tagayo sawirka cagihiisa halkaas.
8 - Xagasha dhagax madow (koonfur bari).
9 - Xaglaha Yemen (South-galbeed). Dhagax weyn oo la geeyaa wuxuu qaabeeyaa geeska dhismaha. Caadada ayaa ah in la daajiyo ama lagu salaamo dhagaxan.
10 - Xaglaha Suuriya (Cham) (Waqooyi-galbeed).
11 - XaglahaCiraaq (Waqooyi Bari).
12 - Kiswa (Carabi: كسوة [Kiswa] dhar u ah; jubbadda, drapery) Vil xirtulay dahab, oo daboolaya Kaaba (magac kale oo Carabi ah: ستار الكعبة [Sitār al-ka`aba], daboolka / derbiga laga xiro ee Kaaba).
13 - Furka Marble oo calaamad u ah bilowga iyo dhamaadka wareegyada.
14 - Goobtan waxaa mararka qaarkood loo yaqaan Xarunta Gabriel (Carabi: مقام جبريل [maqām jibrīl], Xarunta Gabriel).
Ilaaha ugu sarreeya, ayaa amar siiyay ADAM nabadgalyo korkiisa ha ahaato, si ay ugu dhisaan muunad isku mid ah oo dhulka ku yaal, isaga oo u muujinaya cabbirkiisa iyo meesha saxda ah ee saxda ah ee dhulka.
Malag Jibriil markii uu dhagax madow ka keenay Jannada, goor dambe iyo gaadiid wuxuu u kala burburin doonaa dhowr qaybood oo gabal ayaa maanta lagu hayaa matxafka Qaranka ee Ingiriiska oo daraasaddiisu ay dhammaatay Xaqiijiye inay shaki la'aan tahay dhagaxii ugu da’da weynaa dunida uguna caansan, sidoo kalena cadeynaya, laakiin aan macquul aheyn, in dhagaxan la lafaguray xitaa uusan ka imaan karin nidaamka qoraxda.
Kacbada, goor dambe ayaa la baabi'in doonaa iyada oo dib loo dhisi doono Ibraahim iyo wiilkiisa Ismaaciil. Ka dib qiyaastii 590, aasaaska Kaaba waxaa si xun u waxyeeleeyay roobab mahiigaan ah. Hanjabaadyo in la dumiyo, meesha quduuska ah waa in la dumiyo oo dib loo dhiso by Quraychites, oo ah qabiil qadiim ah oo lagu tiriyey ku nool qalbiga Makka.
Halkan waa qorshihiisa, qaabdhismeed jajab ah oo ku saabsan mitirka 15.
Kaaba waa dhisme ku dhawaad ​​dhudhun ah oo dhererkiisu yahay 15 m oo dhinacyadiisu yihiin 10 iyo 12 m. Waxay leedahay hal furitaan, albaab, kaas oo la furay seddex jeer sanadkii si loogu oggolaado in sagxadda lagu maydho biyo laga soo qaaday isha Zamzam (isha ay soo saartay malaa'ig Jibriil ilaa Agar (haweeney ah Ibraahim) markay si aad ah ugu raadineysay biyo ilmaheedii Ismaaciil markii ay haajireen markay cidlada dhex joogeen).
Gudaha, qolka ayaa maran. Saqafka, oo markii horeba uusan jirin, ayaa waxaa taageera seddex tiirar oo alwaax ah, darbiyadaana waxaa ku daboolan marmar. Istaag, jaranjaro ciriiri ah ayaa fursad u siinaya marinka guriga. Waxaan amaahanaa sanadkii hal mar si aan u badalno kiswa, buugga madow, oo lagu dhejiyay aayadaha Qur'aanka ee daboolaya dhismaha. Illaa iyo hadda, wax aan caadi ahayn oo ay tahay in la xuso, waa taarikh fudud oo dhagax ah oo lagu daray dhagaxa madow, astaan ​​weyn oo leh booska 'SATELLITE' oo u taagan astaan ​​taariikhi ah “in dhismahan si wanaagsan loo qabtay of amar jannada ah….
Haddii aan ku laabano jagada dhulka Koban, doorashada jagada dayax-gacmeedka ayaa sidoo kale aad u la yaab leh. Sida haddii booska loo soocay digitally.
1) Goobta dayaxgacmeedku waxay ka dhigtaa xarun caalami ah.
Indeed haddii aan qaadan masaafada u dhexeysa pole woqooyi ee Mecca (12348.32Km) iyo masaafada ay ka baallaha koonfurta of Mecca (7631.68Km) waa sidaas oo ka shaqeeya: 12348.32 qaybiyey 7631.68 1.6180 =
“1.618” natiijada sifiican loogu yaqaanay "AMA tirada" ama "saamiga saxda ah".
Tani, waxay noqoneysaa xaqiiqo la yaab leh!
2) saxnaanta Warqadda, ereyga
Haddii aan sidoo kale qaadanno ereyga Baakka, kaas oo sidoo kale la yaab leh maadaama ay mar keliya ku soo muuqato dhammaan Qur'aanka oo dhan kaas oo magacaabaya Makka halka ay ku taallo.
Aayaddan ka hadlaysa waxa ku jira waraaqo 47, haddii aan rabno inaynu raadinno saamiga ugu sarreeya ee aayaddan u muuqata in ay rabto in aan helno fiirsigeena aan helno 47 / 1.618 = 29
Maxaad u malaynaysaa ereyga 29 ee aayaddan? ... Bakka!
Eray eray ka dhigan Mekti iyo kaaba (maadaama Baaka gadaal ka siinayo Kaaba).
3) Waxaa soo galaya tiro aad u sarreeya oo khadadka ah!
Tani waxay ka dhigeysaa taallo leh isha ugu weyn ee tamarta adduunka. Markaad ogtahayna in tamartu isu beddelayso saacad dhinac iska soo hor jeedda saacad maleh maxay tahay in loo wareejiyo tamarta ugu weyn adduunka isla jihadaas?
Markaad u rogto isha ugu weyn ee tamarta dabiiciga ah adduunka waxaad si fudud tamar uga heleysaa.
Sidaa awgeed ceelashadu waxay dareemayaan dareemayaasha kuwa xajiya xajka Mecca inta lagu guda jiro safarada ku wareegsan hareerahan.
In kasta oo ay tahay barta eber ee soo jiidashada dhul ahaaneed “aagga isu-dheellitirka ulaha” ama “aagga of magnetismka” mareeggu ma guurto.
Dadka ku jira xuubka ayaa sidaas awgeed hoos u dhac ku yimaada cufnaanta dhulka, waxayna ku jirtaa caafimaad aad u wanaagsan marka loo eego kuwa ku dhow xawaaraha.
Halkan, ka dibna, dhibic saddexaad oo cajiib ah oo ka soo baxa meeshii ugu dambaysay ee xiga 4th ee xiga.
4) Shucaaca ugu dheer adduunka
Dhulku wuxuu hadda daadanayaa (weligiisna ahaa) shucaac aad u la yaab leh, shucaac u diidaya aragti kasta oo ku saabsan mowjadda loo yaqaan (oo guud ahaan gaagaaban), laakiin markan iyo cirfixiyeyaasha dhowaan waxay arkeen dherer aad u wanaagsan oo wareegsanaysa oo ka soo bilaabmaysa dhulka ilaa bannaanka, iyada oo raacaysa waxay umuuqatay mid aan xad lahayn ilaa ay ku biirtay dalool madow si ay uga baxdo si weyn ugarana aduunkeena uguna lumisay godka madow ee galakteena. Iyaga oo awoodi waayey inay u dhawaadaan daloolkan madow, waxay ku noqdeen meeshii ay ka bilaabeen, asalka hirarkan. Sidaa darteed waxay raadinayeen barta laga bilaabayo ilaa xudunta u bixida mawjadani ay muuqato waxayna sheeganayaan in mawjadani ay si layaab leh uga timid Makka oo si sax ah uga timid taallada lafteeda, si kale haddii loo dhigo: cube lafteeda.
Qurxinta miiska islaamka, midda Kaaba, soo-bandhig, Dahab / madow - 1960-yadii
1 cusub oo ka yimid € 75,00
Iibso 75,00 €
laga bilaabo Sebtember 22, 2020 1:30
Afkaarta Kaaba ee dahabka iyo madow.
Hadiyad Muslim ah oo Fiican Ciid, Shahadah, Aroos ama Xaj.
Resin iyo velvetvet waxay ku qornaa rhinestones Iyada oo lagu sawirayo luqadda Carabiga.
Cabbirada: 11,4 cm sare; salka wuxuu cabbiraa 10,2 x 10,2 cm.
Lagu sameeyay Turkiga.
Is-edbinta maalinlaha ah - Martin Meadows (Audio)
Lasoco Rampage: Xakameyn Ka Baxsan (2018)
Xakamee timaha luminta saliida madow